. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: သီရိလင်္ကာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဗောဓိညောင်ပင်ပါ .. ညတိုင်း ၇ နာရီခွဲလောက်ဆို ရွတ်တဲ့ ဖတ်တဲ့ ပွဲတွေရှိတယ်ပြောပါတယ် .. လပြည့်တိုင်းလည်း ပွဲတွေရှိတယ်တဲ့ .. မြန်မာအသံနဲ့တော့ ရွတ်တာမဟုတ်ပါဘူး .. မြန်မာ ဘုရားစာတော့ မြန်မာဘုရားစာပါ ..
ဒါက ဗောဓိညောင်ပင်ရှေ့က ပုံဝတ္တုတခုကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ပုံပါ ..
ညောင်ပင်ဘေးက ဓမ္မာရုံ ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ မြတ်စွာဘုရား ဆင်းတုတော်ပါ .. ည မှောင်နေတဲ့အပြင် မီးလည်း မှိတ်ထားတော့ ပုံက တော်တော် ၀ါးပါတယ် .. သည်းခံကြပါကုန် ..း)
ဓမ္မာရုံ တတိယထပ်ကို တက်တက်ချင်း ဖူးရတဲ့ ဆင်းတုတော်ပါ ..
တိုပါးရိုး အမ်အာတီကနေ ၃၁. ၈ စတဲ့ ကားတွေ စီး .. after blk 195 မှတ်တိုင်မှာဆင်း .. အမ်အာတီကနေ ၃ ၄ မှတ်တိုင်ပဲကြာတယ် .. ဆင်းပြီး တဖက် ကားလမ်းကို ကူး .. တိုက်တွေ မြင်နေရတဲ့ဘက် (တိုက်တွေဘက်ကို လမ်းလေးအတိုင်း သွား) ဘယ်ဘက်ကိုဆက်လျှောက် အဲဒီမှာ မြက်ခင်းပဲ မြင်နေရတယ် .. လျှောက်ရင်း ၅မိနစ်လောက်ကြာရင် under pass လေးကို မြင်နေရတယ် .. အဲဒီလမ်းတိုင်း ၀င်သွား .. တည့်တည် ထွက်လိုက်ရင် လမ်းနဲ့ တည့်တည်ပဲ .. ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တာနဲ့ ဘုရားဆင်းတုကို လှမ်းမြင်နေရတယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/11/2009 12:56:00 PM